Waxbarasho - BBC News Somali
Posted at 8:43 25 Luulyo 20218:43 25 Luulyo 2021
Eng. Maxamuud Jimcaale
Madaxweynihii hore ee Jaamacadda Jamhuuriyaha
Ka dib burburkii dowladdii dhexe ee Soomaaliya, 1991, dadkii uu khasaaraha soo gaaray waxaa ka mid ahaa ardeydii jaamacadaha.
Posted at 8:36 4 Abriil 20218:36 4 Abriil 2021
"20 sano ku dhawaad ayaan macallin ahaa, waxna ma qori karin mana akhrin karin"
John Corcoran wuxuu ka qalinjebiyay jaamacad, wuxuuna noqday macallim - balse sir aan caadi ahayn ayuu haystay.
Posted at 6:12 27 Jannaayo 20216:12 27 Jannaayo 2021
Posted at 12:56 13 Nofembar 202012:56 13 Nofembar 2020
Posted at 13:17 23 Oktoobar 202013:17 23 Oktoobar 2020
Posted at 17:55 16 Sebtembar 202017:55 16 Sebtembar 2020
Dhibaatada taagan ayaa aha , sidee carruurta ay dib ugu laaban karaan iskuullada iyaga oo badqaba, si aanay waxbarashada u seegin xilli dunida uu saameeyay cudur dilaa ah oo aan weli loo heli tallaal.
Posted at 8:32 10 Sebtembar 20208:32 10 Sebtembar 2020
Dr. Cabdullaahi Sheekh Adan (Muqaddin)
Khabiir ka tirsan Machadka Heritage - @Muqadin
Dad badan ayaa saluugay natiijadii dhowaan soo baxday ee dugsiyada sare ee Soomaaliya.
Posted at 13:46 7 Sebtembar 202013:46 7 Sebtembar 2020
Wasaaradda waxbarashada ee dowladda federaalka oo ka jawaabtay eedeymaha loo jeediyay natiijada imtixaanaadka
Posted at 10:31 25 Agoosto 202010:31 25 Agoosto 2020
Ninka keli ah ee ka dheereeya meshiinta wax lagu xisaabo
Waa 20 sano jir, wuxuuna ku guleystay billad dahab ah xilli uu ka qeyb galay tartanka xisaabaadka maskaxda.
Posted at 13:57 23 Disembar 201913:57 23 Disembar 2019
Muuqaal: Cabdulaahi "Waxaan doonaynaa in aan buug u helno arday walba oo ku nool Xerada Dhadhaab".
Video caption: Cabdulaahi "Waxaan doonaynaa in aan buug u helno arday walba oo ku nool Xerada Dhadhaab".Cabdulaahi "Waxaan doonaynaa in aan buug u helno arday walba oo ku nool Xerada Dhadhaab".